Kungani Izindaba Zokushesha Kwewebhusayithi nezindlela ezi-5 zokuzikhulisa | Martech Zone
Kungani Izindaba Zokushesha Kwewebhusayithi nezindlela ezi-5 zokuzikhulisa
NgoLwesibili, ngo-Mashi 17, i-2020 NgoLwesine, ngoMashi 19, 2020 UKatherine Horne
Ngabe wake wanikela ngekhasi lewebhu elilayisha kancane, ngokuthepha inkinobho yokubuyela emuva ukuze uthole ulwazi obulufuna kwenye indawo? Vele unayo; wonke umuntu unesikhathi esithile noma kwesinye. Ngemuva kwakho konke, ama-25% ethu azoshiya ikhasi uma lingangenanga ngaphakathi imizuzwana emine (futhi okulindelwe kukhuphuka kuphela njengoba isikhathi siqhubeka).
Kepha akusona ukuphela kwesizathu sokuthi ijubane lewebhusayithi libaluleke. Amazinga we-Google cabanga ukusebenza kwejubane lesivinini sakho. Isivinini esincane singalimaza amazinga wewebhusayithi yakho noma ngabe okuqukethwe kwakho kukuhle kakhulu.
Ngamafuphi, ukuthi imithwalo yakho yewebhusayithi izoshesha kangakanani ekuthinteni amathuba okuthi izivakashi zithole iwebhusayithi yakho. Lapho sebethole iwebhusayithi yakho, ukusebenza kwesayithi lakho kunomthelela ekutheni bahlala yini babheke okuqukethwe kwakho. Manje ake sibheke izindlela ongathuthukisa ngazo ukusebenza kwewebhusayithi yakho.
1. Sebenzisa i-Google's PageSpeed ​​Tools
I-Google Amathuluzi we-PageSpeed ziyindawo enhle ukuqala uma kukhulunywa ngokuthuthukisa ukusebenza kwesayithi lakho.
Ungahlaziya iwebhusayithi yakho ngePageSpeed ​​ukuthola amaphuzu aphelele, okuyinombolo ekhombisa ukuthi iGoogle icabanga ukuthi isayithi lakho lenza kahle kanjani - ukuphakama kwesikolo sakho, iwebhusayithi yakho iyashesha (futhi ingcono).
2. Lungiselela Izinsizakusebenza Zewebhusayithi Yakho
Kusetshenziswa amafayili ambalwa nosayizi befayela abancane kuyasiza. Bangu izinto eziningana ungakwenza ukufeza lokhu:
Lungiselela izithombe zakho: Okokuqala, qiniseka ukuthi usebenzisa uhlobo lwefomethi enhle kakhulu yezithombe zakho (isb., Ama-JPG wezithombe, ama-PNG enzuzo). Cindezela izithombe zakho, usebenzisa izindlela ezingalahleki ezinciphisa usayizi wefayela lakho ngenkathi kugcinwa ukwethembeka kokubuka (okungenani esweni lomuntu). Qiniseka ukuthi osayizi bezithombe zakho bafanele - shintsha usayizi wezithombe ukuze zingabi zinkulu.
3. Isilondolozi, Inqolobane, Isilondolozi sewebhusayithi yakho
Ukulondolozwa kwesikhashana kuyinto enkulu ekusheshiseni isivinini sakho sokulayisha ikhasi. Kunezinto ezimbili okufanele uzenze uma kukhulunywa ngokulondolozwa kwesikhashana.
Okokuqala, thola futhi usebenzise i-CDN noma inethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe. Ama-CDN ngamanethiwekhi wamaseva agcina amakhophi ewebhusayithi yakho. Lapho-ke, lapho othile ecela iwebhusayithi yakho, ilethwa kubo kusetshenziswa iseva esondele kakhulu kubo. Lokhu kunciphisa ibanga amaphakethe okufanele alihambe ngaphambi kokufika kumsebenzisi.
Okwesibili, setha i-caching kuzihloko ze-HTTP ezihambisana namafayela asuka kuseva yakho yewebhu ukuze iziphequluli zabasebenzisi zikwazi ukugcina ezinye (uma kungezona zonke) zewebhusayithi yakho. Yize lokhu kungasizi ngokweqile ekuvakasheni kokuqala kwabasebenzisi, kungaba usizo ekuvakasheni okulandelayo lapho kungadingeki balinde inqobo nje ukuthi iwebhusayithi yakho izolayishwa
4. Qiniseka ukuthi iWebhusayithi Yakho iyi-Mobile-Friendly
Abasebenzisi beselula bavame ukuba kumanethiwekhi ahamba kancane kunalawo asetshenziswa ama-PC nama-laptops. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi isayithi lakho likwazi ukulayisha ngokushesha ezimeni ezingafaneleki kangako. Izinhlobo zamasayithi weselula kufanele zenzelwe ukudinga umkhawulokudonsa omncane ozakwabo besikrini esikhulu.
5. Khetha Umhlinzeki Omuhle Wokubamba Iwebhu
Ungenza konke kahle ngokuqhakambisa iwebhusayithi yakho, kepha uma umhlinzeki wakho wokusingathwa kwewebhu esebenza njengebhodlela, ungahle ubone izikhathi zokulayisha iwebhusayithi ezihamba kancane.
Qiniseka ukuthi ukhethe uhlelo lokusingathwa oluvumelana nezidingo zakho. Izinketho ezilungele isabelomali, ezingabizi kakhulu zingabonakala zikhanga, kepha zingafika nemikhawulo engahle ibambezele isiza sakho (ikakhulukazi uma ubona amazinga aphezulu ethrafikhi noma uma amakhasi wakho wewebhu enesisetshenziswa esinzima).
Futhi, qiniseka ukuthi umbungazi wakho ungumhlinzeki oqinile wezinsizakalo ezisheshayo. Akuzona zonke izinkampani ezidalwa zilingana, kanti ezinye izinkampani zinikeza amakhasimende azo amaseva asheshayo, noma ngabe zibambe konke okunye kulingana. Kungaba nzima ukusho ukuthi imaphi ama-host, kepha ukubuyekezwa kwamakhasimende ingaba wusizo ngesikhathi senqubo yokuthenga.
Ijubane lewebhusayithi yakho libalulekile, maqondana nokuthola nokugcina izivakashi, ngakho-ke uzofuna ukuqinisekisa ukuthi amakhasi akho alayisha ngokushesha okukhulu. Ngenhlanhla, ukwenza ukusebenza kwewebhusayithi yakho akunzima kangako, futhi kule ndatshana, sihlanganise ukunqoba okusheshayo okuzosiza iwebhusayithi yakho.
UKatie Horne ungunjiniyela wesoftware futhi ungumbhali wezobuchwepheshe. Uneziqu zezibalo nezomnotho azithole eSmith College. Umsebenzi wakhe uhlanganisa izihloko ezahlukahlukene kusuka ekuphathweni kobunikazi nasekufinyeleleni ukufinyelela ekubanjweni kwewebhu.
IZenkit: Phatha Imisebenzi Emaphethelweni Amaqembu, Amadivayisi Nezinkampani
Ukuhlukaniswa: Isikhathi Sokuya emsebenzini